यी हुन यो वर्षका नवनायक, को हो स्टार आयुष्मान की आर्यन ? « Mazzako Online
यी हुन यो वर्षका नवनायक, को हो स्टार आयुष्मान की आर्यन ?
यो वर्ष ८५ फिल्महरु प्रदर्शन भए । जसबाट नेपाली फिल्मवृत्तमा झन्डै एक दर्जन नवनायकको आगमन भयो तर अपेक्षाकृत चर्चा बटुल्नेहरुको खडेरी पर्यो । आफ्नो अभिनय कौशलबाट प्रशंसा कमाउनेको संख्या ज्यादै न्यून छ । भलै केही नव अनुहारले नेपाली फिल्म उद्योगमा लामो समय चम्कने लक्षण नदेखाएका होइनन् । यो वर्ष डेब्यु भएर सम्भावना देखाएका पाँच नायकहरुलाई हामीले यसरी सुचीकृत गरेका छौं ।
फिल्म ‘के म तिम्रो होइन र’ मा अभिनय गरे सँगै आर्यनको चर्चा सुरु भएको हो । फिल्म प्रदर्शन ताका उनको ‘सिक्स प्याक बडी’ ले सामाजिक सञ्जालमा खुब व्यापकता पायो । कतिपयले उनलाई बलिउड स्टार टाइगर श्राफसँग तुलना गरे । सुगठिलो शरीर, एक्सनमा दख्खल र अभिनय राम्रो गर्न सक्ने आर्यन निर्माता तथा निर्देशकको रोजाईमा पनि परिरहेका छन् । फिल्म ‘बटरफ्लाई’ मा नायिका प्रियंका कार्कीसँग स्क्रिन सेयर गरेका आर्यन हाल ‘करोडपति’ को छायाँकनमा व्यस्त छन् । बलिउडका चर्चित कलाकार राजपाल यादवको समेत अभिनय रहेको यस फिल्ममा आर्यनको अपोजिटमा नीता ढुंगाना छिन् । उसो त निर्देशक सबिर श्रेष्ठले नायिका रेखा थापा र आर्यनलाई लिएर ‘कसो कसो माया बस्यो’ बनाउने घोषणा गरेका छन् ।
२. आयुष्मान देशराज जोशी
सुपरहिट फिल्म ‘चपली हाईट’ को सिक्वलेमा अनुबन्धित भएसँगै चर्चामा आएका नायक हुन्, आयुष्मान देशराज जोशी । अग्लो कदका धनी आयुष्मान खासगरी सहरिया पुस्तामाझ ‘हटकेक’ बने । अफयेर र ट्रयाजिडीका कारण पनि उनी मिडियामा छाइरहे । ‘चपली हाईट २’ कै नायिका परामिता राज्य लक्ष्मी शाहसँगको लामो समयको सम्बन्धलाई पूर्ण विराम लगाएर उनी नायिका प्रियंका कार्कीको प्रेममा लीप्त भएको खबर केही समय अघि मात्रै मिडियामा भाइरल बन्यो । यतिबेला उनी प्रियंकासँग ‘कथा काठमाण्डू’ नामक फिल्मको छायाँकनमा रमाइरहेका छन् ।
फिल्म ‘म त तिम्रै हँ’ असफल भएपनि निर्माता तथा निर्देशकको रोजाइमा परेका नायक हुन्, आकाश श्रेष्ठ । आकाशले भर्खरै नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहसँग फिल्म ‘तिमी सँग’ को छायाँकन सकाएका छन् । अर्को एक नयाँ फिल्ममा पनि उनी अनुबन्धित भएका छन् । ‘गुड लुकिङ’ आकाशलाई धेरैले चकलेटी रोलका लागि अफर गरिरहेका छन् । ‘तिमी सँग’ प्रदर्शनसँगै नेपाली फिल्म वृत्तमा आकाशको डिमान्ड बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
म्युजिक भिडियोका स्थापित मोडल पुष्पल खड्का फिल्म ‘दर्पण छायाँ २’ बाट नायकका रुपमा देखा परे । त्यसो त यस अघि उनी ‘अझै पनि’ मा देखिएका थिए । तर त्यसमा सहायक भूमिका भएकाले ‘दर्पण छाँया’लाई नै उनको डेब्यु मानियो । भलै भेट्रान निर्देशक तुलसी घिमिरे निर्देशक यही फिल्मले पनि बक्स अफिसमा कमाल देखाउन सकेन । जसले गर्दा पुष्पलको चर्चा स्वतः कम भयो । तर ‘दर्पण छायाँ २’ रिलिजपुर्व नै निर्माता छविराज ओझाले ‘मंगलम’ मा काम गराएका थिए । सोही कारण वर्ष २०७४ मा उनको फेरि पनि परीक्षण हुनेछ । यद्यपी ‘क्युट लुक्स’ का पुष्पललाई कुशल अभिनय गर्न सक्ने हिरोको रुपमा नहेरिएको भने होइन ।
निर्माता छविराज ओझाले निर्माण गरेको फिल्म ‘किस्मत २’ बाठ डेब्यु भएका हुन, पृथ्वीराज प्रसाईं । यो फिल्म बाट उनले औसत चर्चा बटुले । उनले छविराजकै अर्को फिल्म ‘मंगलम’ मा शिल्पा पोखरेलसँग स्क्रिन शेयर गरेका छन् । भलै बाहिरी ब्यानरका फिल्ममा पृथ्वीले हिरो हुने अवसर पाएका छैनन् । नवल नेपाल निर्देशित ‘मंगलम’ ले उनको लोकप्रियताको दायरा फराकिलो बनाउने विश्वास राखिएको छ ।
यी सँगै यो वर्ष ‘द विनर’ बाट महेशमान श्रेष्ठ र मन्चिन शाक्य, ‘लप्पन छप्पन’ बाट प्रकाशजंश शाह र सिड खरेल नव नायकको रुपमा आए । ‘द विनर’ व्यापारिक रुपमा असफल भएपछि महेश र मन्चिनको खासै चर्चा भएन भने ‘लप्पन छप्पन’ मा सौगात मल्ल, दयाहाङ राई र अर्पण थापा जस्ता स्टार हावी भए ।
बरु ‘कालो पोथी’ मा बाल कलाकारहरु खड्गा राज नेपाली र सुरज राज रोक्का, ‘सेतो सुर्य’ का अमृत परियार अनि ‘डाइङ क्यान्डल’ का लाम्पा सिङी लामाले काफी प्रसंशा कमाए । विदेशी फिल्म फेस्टिभलमा वाहवाही कमाएको ‘कालो पोथी’ त स्वदेशी बजारमा पनि सफल भयो ।